Oromoon ETIYOOPHIYUMMAA hin didne, garuu ETIYOOPHIYAAtuu oromoof orummummaa hin feene. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOromoon ETIYOOPHIYUMMAA hin didne, garuu ETIYOOPHIYAAtuu oromoof orummummaa hin feene.
”Gal jennaan erbeen jilbatti galte” jedha Oromoon yoo makmaaku. Bilxiginnaan akkanatti yoo erbee ofirraa soqoltee eenyummaa ishii isa dhugaa gabaatti labsitu gaarii dha. ”Seenaa dogoggoraatiin warra nu qoqqooduuf hojjetutu jira” jetti. Seenaan dogoggoraa ishiin baantu seenaa Oromoon sirna Nafxanyaa irratti himatuu dha. Seenaan sun seenaa dhalachuu qabsoo Oromoof sababa hundee tahee dha. Qabsoo seenaa kana iratti hundaawee waggaa 50f gatii qaalii kafalaa guyyaa kana gahe ”dogoggora” jechaa jirti. Bilxiginnaan kal’oo hoolaa uffattee Afaan Oromoo dubbachuun Oromootti fakkeessuuf dhamaatus eenyummaan ishii akkasitti dirree baha.
Amboo irratti suuraan jaal Laggasaa Wagii caalbaasii qarshii 100,000tiin gurgurame. Garee Ginciitu injifate. Isaanis akka kennaatti artist Ilfinash Qannoo badhaasan. Walgahii keenya har’aa milkiin xumurree jirra.
Namnii galaannii fuudhe hoomacha qaqabaataan jedhan sun kan akka Dr ashaagree kanaadha.
Otuu innii waajira taa’ee namoota Isa suuraa kaasuuf ijjaajjan 20 olii fii Kan Isa tiksuuf dhaabbatan 20 0l hojiittii bobbaase yookiin immoo hanga taankiif meeshaa waraanaa bitan otuu konkolaataa haamaa bitanii waldaan qotee bulaaf hiranii irra filatamaadha.
Kan nama dhibu na galeetafadhaa Kan jechuudha. Hahahhahahahah
ምን ትሉ ይሆን ደሞ??? በሁሉም ዘርፍ ያሟላ ጀግና አቢቹን ብቻ አየሁ ለፎቶ ነው እንዳትሉ አስተጫጨድ የአርሷደር ነው በምን ሚዛን ይህን ሰው መተቸት ይቻላል???
Beekamtii Rakasaa, Suuraa ka’uuf😝 Mee dura ajjeechaa sana dhaabsisimee.
Boorana keessaa bakka adda addaatti hiriirri mormii geggeeffamaa jira. Hiriirri kunis ajjeechaa
Yuunversiitii Naannoo Amaaraa keessa jiru keessatti barattoota Oromoorra ga’u balaaleffachuudhaafi.
Yuunivarsiitii Wallaggaatti barataa Ikkoonoomiksii kan tahe JIREENYAA YAADATAA poolisoota federaalaatiin akka malee reebamuun miidhamni ulfaataan irra gahee jira.
Ambo: Ilfee Haadha Sabboontotaa- Cichituu akka sibiilaa kan dantaa fi faayidaan kaayyoo Oromoo irraa hin maqsine!!